News app Pọdkastị - Imewe Mmewe
Pọdkastị Akụkọ bụ ngwa a na-agba ajụjụ ọnụ maka ozi dịnụ. Ihe eji eme ya bu ihe ngosi nke ihe eji eme ka apple apple ihe ngosi mee ihe ngosi ihe ndia. N’ile ya anya nwere acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ dị ka ọrụ iji mee ka ihe mgbochi ahụ pụọ iche. Onwere ihe doro anya di ka ihe eji eme ihe, o bu ime ka ngwa di mfe iji n’enweghi uche onye oru ma obu ghara itufu ya.
Aha oru ngo : News app, Aha ndị na-emepụta ya : Raphael Batista, Aha onye ahịa : News Podcast.
Teknụzụ mkpanaka, ngwa na imewe ngwanrọ
Pọdkastị Raphael Batista News app